ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက်: အလုပ်ခွင်သမားဆရာဝန်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူပါ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Software များနှင့်ပံ့ပိုးမှုန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
တင်ဒါအသိပေးချက် - TÜLOMSAŞ 2020 Year ဂိုဒေါင်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု »
TCDD ပို့ဆောင်ရေး INC မော်တော်ယာဉ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးယာဉ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနရုံးAFYONKARAHİSARအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး
Afyon Loko ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပြုပြင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဦး စီးဌာနနှင့် Tavsanli စက်ခေါင်းမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု Depot ညွှန်ကြားမှုလုပ်ငန်းခွင်သမား ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ယူတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအားတင်ဒါတင်ဒါဖြင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည်။ တင်ဒါနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 530180
က) လိပ္စာ: Aliçetinkaya Mahallesi Silo Yolu လမ်း2/603040 AFYONKARAHİSARဗဟို / AFYONKARAHİSAR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621 - 2722132944
ဂ) အီးမေးလ်လိပ်စာ afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
Afyon Loko ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးပြုပြင်ရေးအလုပ်ရုံ ဦး စီးဌာနနှင့် Tavsanli စက်ခေါင်းမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဂိုဒေါင် 01.01.2020 - 31.12.2020 လုပ်ငန်းခွင်သမားဆရာဝန် ၀ န်ဆောင်မှုဝယ်ယူမှု။
ခ) နေရာ - TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar စက်ခေါင်းယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဌာန / Afyonkarahisar နှင့် TCDD စက်ခေါင်းယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဌာနသိုလှောင်ရုံTavşanlı / Kütahya
ဂ) သင်တန်းကာလ - စတင်ရက်စွဲ 01.01.2020၊ အဆုံးရက် 31.12.2020
က) တည်နေရာ - TCDD ။7။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုသင်တန်းနှင့်အစည်းအဝေးခန်းမAliçetinkaya Mah ။ GAR / AFYONKARAHİSAR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 11.11.2019 - 11: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ငန်းခွင်သမားန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 30 / 11 / 2015 လုပ်ငန်းခွင်သမားဆရာဝန်ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ STATE RAILWAYS (TCDD)2၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းများညွှန်ကြားမှု2ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုမှ ၀ ယ်ယူသည့် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ယူခြင်းအလုပ်ဝယ်ယူခြင်း hizmet
အလုပ်ခွင်ထဲမှာယူသွားဆရာဝန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်TÜLOMSAŞ 25 / 01 / 2013 TÜLOMSAŞတူရကီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံးထံမှလက်ခံရရှိအလုပ်ခွင်သမားလုပျဆောငျသငျ့Eskişehirကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတ Nazim Yilmaz, တူရကီစက်ခေါင်းများနှင့်အင်ဂျင်စက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ် (အဆိုပါကန်ထရိုက်တာ) အလုပ်ခွင်ဆရာဝန်စုဆောင်းမှုမှတင်ဒါလျှောက်လွှာမူတည် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သမားန်ဆောင်မှု Afyon xnumx.bölg Loko ကို Maintenance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမန်နေဂျာဘိန်းနှင့်စက်မှုအလုပ်ရုံဌာနနှင့်ရုံး Depot Tavsanlıကွန်ကရစ်၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုပေါ် မူတည်. (ဖြစ်ရလိမ့်မည် ... 28 / 08 / 2013 အလုပ်ခွင်သမားဆရာဝန်ဝန်ဆောင်မှု (TCDD 7. Afyon Loco ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုပြင်ရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၊ စက်မှုအလုပ်ရုံ ဦး စီးဌာနနှင့် Tavsanli ဂိုဒေါင်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့် Tavsanli ဂိုဒေါင်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့် Afyon ကွန်ကရစ်အိပ်စက်စက်ရုံညွှန်ကြားမှု 407 çalışan
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သမားန်ဆောင်မှုများ (အ TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölgစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်. ) ဖြစ်လိမ့်မည် 31 / 07 / 2013 အလုပ်ခွင်တွင်ဆရာဝန် ၀ န်ဆောင်မှုကို STATE RAILWAYS (TCDD)7၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ TCDD7လက်အောက်ရှိဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းများညွှန်ကြားမှု Afyon Loko ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြုပြင်ရေးအလုပ်ရုံ၊ စက်မှုအလုပ်ရုံ ဦး စီးဌာနနှင့်Tavşanlıဂိုဒေါင်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သမားန်ဆောင်မှုများဖြစ်လိမ့်မည် 14 / 11 / 2013 ရုံးဆေးသမားဝန်ဆောင်မှုကို TCDD 7REGION DIRECTORATE AFOKY LOKO MAINTENANCE AND WORKSHOP DIRECTORATE၊ MECHANICAL WORKSHOP DIRECTORATE နှင့် TAVERNAN WAREHOUSE DIRECTORATE AFYON CONCRETE TRAVERS FACTORY
အလုပ်ခွင်သမားဆရာဝန်ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူလိမ့်မည်, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အထွေထွေညွှန်ကြားမှု
Altındağရပ်ကွက် Hippodrome Anafartalar Caddesi အဘယ်သူမျှမ:335530 Türkiye + Google Maps ကို
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သမားန်ဆောင်မှုများ (အ TCDD ညွှန်ကြားမှုxnumx.bölgစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်. ) ဖြစ်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အလုပ်အကိုင်သမားန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜDEMSAŞ)